DAAWO Weerar ka dhacay Labo Masjid ku yaala dalka New Zealand iyo Khasaaraha Ka Dhashay |
DAAWO Weerar ka dhacay Labo Masjid ku yaala dalka New Zealand iyo Khasaaraha Ka Dhashay
Labo Masaajid oo ku yaalo magaalada Christchurch ee Dalka New Zealand ayaa dablay hubaysan ay weerareen, ayadoo lagu jiro xiliga salaada Jimcaha. Inta wararka horudhca ay sheegayaan ayaa dhimashada ka dhigayso 6 qof iyo intaasi ka badan dad ah oo dhawacyo ay soo gaareen
Booliiska magaalada ayaa guud ahaanba magaalada Bandow kusoo rogay waxaan la xirey Schoolada. Dad badan ayaa dareemay cabsi la xariirta arinkan waxaana booliska iyo hayadaha amniga ay baaritaano ugu jiraan raggii dableyda ahaa ee falkaasi ka dambeyey.
Sahra Ahmed oo ka mid ah Somalida degan magaalda Christchurch ayaa sheegtey in dad tiro badan la dhigay Isbitaalka ayagoo dhaawac ah. Sahra CAbdi Axmed ayey khadka telefoonka ugu warantey sida Masaajida la weeraray ay wax uga dhaceen.